Golaha wasiirada Ra’iisul wasaare Rooble oo soo saaray go’aamo farxad geliyey shacabka
October 29, 2020 Xuseen 1
Shirka Golaha Wasiirrada oo uu guddoominayey Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa la isku raacay sharci ahaanta dhammaan go’aammadii ay gaareen golihii Wasiirrada Xukuumaddii xil gaarsiinta, kuwaas oo isugu jiray xeerar , siyaasado iyo heshiisyadii ay galeen.
Shirka Golaha Wasiirrada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa lagu meel mariyey ku talagalka Miisaaniyad sanaddeedka Dowladda ee 2021 oo ay qeyb ka tahay qarashka doorashada iyo sharci ahaanta dhammaan go’aammadii ay gaareen golihii Wasiirrada Xukuumaddii xil gaarsiinta.
Miisaaniyadda guud ee sanadka 2021 ayaa dhan $671.8 million oo u qeybsan saddex qeybood oo kala ah ,Dakhliga Gudaha 260.1 million iyo Kabka Miisaaniyadda oo noqonaysa 170.9 million, halka ay mashaariicdu yihiin 240.8 million.
Miisaaniyadda ayaa diiradda saareysa fulinta qorshaha qaranka, waxaana loo qoondeeyey dhanka horumarinta qaddar dhan 38 million, lacagtaas ayaa lagu bixin doonaa arrimo la xiriira.
WANKA MACASHA II QABO ANIGUNA AAN GAWRACO; TUUGO ISBAHAYSATAY!
Qaar kamid ah xidigihii ugu wanaagsanaa koobkii Somaliland oo ka dhex muuqda xulka Puntland.
Kulamo muhiim ah oo ka qabsoomay Muqdisho iyo dowladda federalka ah oo balan qaad u samaysay Puntland.
VIDEO: Barlamaanka Puntland oo sabtida ka doodaya heshiiska DP World ee dekedda Boosaaso.
Musharixiinta mucaaradka,”Fahad Yaasiin waa inuu iscasilaa maadaama uu ololaha Farmaajo kujir”.
AKHRISO: Go’aamada ka soo baxay shirkii Musharaxiinta M/weyne-nimada Soomaaliya ee ku shiray Muqdisho.
XOG RASMI AH: Puntland oo sharuud ku xirtay in ay la laabato Xubnaha Mucaaradku diidan yihiin ee Guddiga Doorashooyinka Heer Federaal.
Abiy Ahmed oo ciidankiisa ku amray inay duulaan qaadaan & Qaramada midoobey oo ka digtey